Google Maps ugbu a na nkwado KML | Martech Zone
Google Maps ugbu a na nkwado KML
Tọzdee, Disemba 7, 2006 Thursday, June 12, 2014 Douglas Karr
N'oge ndị dị otú a, amaara m na m bụ geek! Taa ndị Google Koodu Blog naanị kwuputara na ha na-akwado faịlụ KML ugbu a.
"Doug, wetuo obi", ị na-ekwu!
Enweghị m ike! Adị m freakin 'pụọ! N'ebe ị na-ejibu mee atụmatụ isi ihe na eserese ngosi, ị nwere ike ugbu a 'tụọ aka' na faịlụ KML ma Google Maps ga-akpachapụ ya na map ha.
"Ee, n'ezie", ị na-ekwu!
Nke a bụ ihe atụ nke faịlụ KML:
Doug You ma na ha mepere Au Bon Pain ebe a?
Iji Google Maps, ana m atụ map iji jụọ faịlụ KML m:
"Chaị", ị na-ekwu n'ikpeazụ! (Atụrụ m anya!)
Lee ihe o siri dị:
Ezigbo ndị folks. Ebe XML bu usoro mgbanwe data nke uwa, KML (nke is XML) bu usoro mgbanwe data jikọtara ala. Nke a bụ nnukwu ọganiru. Iji mmemme GIS ndị ọzọ, ndị mmadụ nwere ike iwepụta faịlụ KML wee mepee ha na iji Google Maps naanị n'ịntanetị.
Tags: maapụ saịtị googlegoogle +kmlkml faịlụSitemapsaịtịmap.xml
Dee 7, 2006 na 1: 37 AM
Ị na-eme ka ọ dị mma… naanị tụọ m aka n'ụzọ nke otu esi eme faịlụ kml na enwere m ike ikwenye nke ọma…
Dee 7, 2006 na 11: 08 AM
Isi ihe dị mma! Aga m emelite post ahụ na ntuziaka, mepee faịlụ KML nke m biputere ma ị ga-ahụ nhazi ya. Faịlụ KML bụ ederede efu. Enwekwara faịlụ KMZ n'ebe ahụ. Ndị ahụ bụ faịlụ KML nke etinyere maka mbufe ngwa ngwa (ọ bụrụ na ị nwere nnukwu faịlụ).
Disemba 7, 2006 na 2:50 mgbede
Nke ahụ dị mma! Gịnị ka ha ga-eche banyere ọzọ?
Disemba 7, 2006 na 4:19 mgbede
Otu ndetu m chefuru ịkọ bụ na faịlụ KML nwekwara ike ịkwado ma ọ bụ meghee ya na Google Earth, ngwa desktọpụ GIS n'efu! Ị nwere ike ibudata beta kacha ọhụrụ ebe a:
Mar 2, 2007 na 3: 29 AM
Nke a dị egwu n'ezie!
Naanị na-eche, gịnị kpatara ikpe faịlụ KML ji enwe mmetụta. Ọ bụrụ na ịmepụta faịlụ XML nwere mkpado nwere obere mkpụrụedemede mmalite. XML/KML anaghị arụ ọrụ. (Nke ahụ bụ ihe mere m :D)
Mar 2, 2007 na 8: 37 AM
Achọpụtara m nke a kwa. Ọ bụ otu ihe ahụ na geotag. Amaghị m ihe mere ha ga-eji tinye mkpụrụedemede ukwu na ọkọlọtọ. M na-eche mgbe niile na ọ dị mma maka smallcase (kama elu), ma ụfọdụ n'ime ndị a ọrụ si n'ebe ahụ bụ n'ezie finicky.
Mar 9, 2007 na 10: 39 AM
Achọtala m ụzọ m ga-esi rụọ ọrụ a.
Achọtala m obere mmemme freeware (xt.exe) nke na-arụ ọrụ na faịlụ XSL nke nwere ike gbanwee XML na-adịghị arụ ọrụ na faịlụ KML na-arụ ọrụ.
Na faịlụ XSL (ụdị mpempe akwụkwọ) na-enye ntọala nke xml na-arụ ọrụ. Enwere m ike iji mkpado nnukwu akpa gbanwee mkpado obere obere. Site na ntinye aha na xml-file na-arụ ọrụ (xml ka kml) ị ga-enweta faịlụ kml na-arụ ọrụ 🙂
Mee 12, 2007 na 1: 38 AM
Ọ bụrụ n'ihi ihe ụfọdụ ị hụghị ya, ihe ọhụrụ google mymaps na-ahapụ gị ka ịmepụta maapụ wee bupụ faịlụ kml.
na ebe ọ bụ na google api ka ị mepụta maapụ na saịtị gị nke e wuru site na faịlụ kml kwadoro… nke ọma, ihe niile na-adị mfe.